Soa azo avy amin'ny Dog Grooming Tables - China Ningbo Haoshu Yinjiang Jintangli
PET Grooming LOHA
White tongotra vy
Soa azo avy amin'ny Dog Grooming Tables
ny latabatra mametraka hatrany ny alika amin'ny mety haavony noho ny bika aman'endrika. Tsy voatery hianatra ny na miezaka awkwardly hampiofana ny alika izy raha mbola ao an-am-pofoany. Kosa, ny fisehoana ankapobe latabatra mametraka ny alika ny mahitsy avo noho ny bika aman'endrika.
Saika alika fisehoana ankapobe rehetra latabatra avy amin'ny karazana sasany tsy taratasy kely ambonin'ny - aza mividy iray raha tsy misy ribbed padding na ny karazana rakotra izay mora noho ny alika ny fangejan'ny. Ny alika dia ho lena ary mety hahasolafaka sy solafaka raha toa ambonin'ny tsy azo antoka. Ankoatra izany, maro ny fisehoana ankapobe latabatra avy amin'ny sandry sy ny vy noose izay azo ampiasaina mba hitandrina ny alika soa aman-tsara ao an-toerana nandritra ny taovolo.
Dingana eo, dingana eny
Amin'ny hydraulic na bika aman'endrika, na herinaratra alika latabatra, dia afaka hampidina ny latabatra efa rehetra ny lalana mankany amin'ny tany. Io no endri-javatra lehibe ho an'ny alika izany no mavesatra, na dia mahatsapa kely taitra, na miady saina. Raha tokony mampiasa hery mba hitondra ny alika ny fisehoana ankapobe toerana, ianao fotsiny mampiasa leash handeha ny alika tao amin'ny latabatra. Rehefa tapitra ny fisehoana ankapobe, hampidina ny latabatra ary ny alika mandeha eny.
Post fotoana: Aug-09-2018
Address: Ningbo HAISHU DISTRIKA YINJIANG TANANA Inside Ningbo YINZHOU HUACHEN Valve Factory